Ibu Ibu - Cmoapi
Anyị na ngwaahịa
Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ
Lorcaserin hydrochloride hemihydrates (856681-05-5)
(R) Lorcaserin hydrochloride (846589-98-8)
Orlistat na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị naghị eri abụba?
Ọ bụrụ na enweghị abụba na otu n'ime nri gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịhapụ nri, ọ dịghị mkpa ka ị were usoro nke ndepụta.
Ndebanye aha ole ka m na-ewe kwa ụbọchị?
A na-ejikarị Orlistat ugboro 3 kwa ụbọchị na isi nri ọ bụla nwere abụba ụfọdụ (ọ bụghị ihe karịrị 30% nke calorie maka nri ahụ). May nwere ike ị theụ ọgwụ ahụ na nri gị ma ọ bụ rue 1 awa mgbe ị risịrị nri.
Nwere ike ịpị abụba mgbe ị na-eri Orlistat?
Orlistat na-egbochi ọrụ nke lipase. Mgbe ị na-a theụ ọgwụ na nri, ihe dị ka pasent 25 nke abụba ị na-eri anaghị agbaji ma wepụ ya site na mmegharị afọ.
Ndepụta aha ọ nwere mmetụta dị egwu?
Mmetụta mmetụta ndị a na-akọkarị na ndepụta gụnyere: eriri afọ ngwa ngwa, mmegharị ahụ mgbe niile, mwepụ mmanu, mmanu mmanu mmanu, steatorrhea, na flatulence na-agbapụta.
Nwere ike were ndepụta 2 ozugbo?
Orlistat na-arụ ọrụ naanị mgbe abụba dị n'ihe ị na-eri, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ nri ma ọ bụ ọ bụrụ na ị rie nri na-enweghị abụba mgbe ahụ, ewerela ọgwụ nke orlistat. Ọ bụrụ na ichefuru ị aụ ọgwụ, echegbula onwe gị; dị nnọọ were a Capsule gị ọzọ nri dị na mbụ. Ejila ogwu abuo abuo iji mezuo ihe eji echefu echefu.
Kedu nke kachasị mma ma ọ bụ Xenical?
Ihe dị iche n'etiti ndepụta na Xenical bụ na ndepụta aha bụ ụdị ọgwụ ahụ, ebe Xenical ka akara. Nke ahụ pụtara na Xenical dị oke ọnụ karịa Orlistat ma mara nke ọma dị ka mbadamba ọnwụ. E kwesiri iwere Xenical n'otu uzo ahu dika orlistat.
Nwere ike ị drinkụ na ndepụta?
Orlistat anaghị a alcoholụ mmanya na-aba n'anya, ya mere ọ dị mma ị drinkụ mmanya mgbe ị na-ewere Orlistat. Otú ọ dị, mmanya na-aba ụba nwere calorie. N'ihi ya, ị drinkingụ mmanya mgbe ị na-ewere Orlistat nwere ike igbochi njem njem gị. Maka ndụmọdụ ndị ọzọ banyere otu esi eme ka Orlistat dịkwuo irè jiri nri Orlistat anyị
Ndepụta aha ọ na-emetụta ọmụmụ?
N'ime ndị na-edebanye aha, a hụrụ ọganihu dị mma na profaịlụ lipid na njedebe nke ọnwa 3. Onu ogugu ndi mmadu bu 40% na 16.7% na 3.3% na akwukwo, otu metformin na otu ndi otu (P - 0.003). Achọpụtara ọnwụ ibu ka ọ bụrụ amụma kachasị mma nke ovulation na nghọta na ezi uche.
Enwere m ike ịdebanye aha otu ugboro n'ụbọchị?
Dosedị ọgwụgwọ nkịtị bụ otu ọgwụ - 120 mg, ugboro atọ n'ụbọchị na nri ọ bụla. Agbanyeghị, ịkwesighi ị oneụ otu ma ọ bụrụ na enweghị abụba na nri ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ nri.
Ndepụta aha ọ na-akpata imeju imeju?
Alli enwere njikọ na mmerụ imeju siri ike na obere okwu, ọ bụ ezie na ọ kachasị mee ndị na-ewere ọgwụ ndenye ọgwụ (Xenical). Kwụsị ị takingụ Alli ma kpọọ dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ị mepee otu n'ime ihe ịrịba ama ndị a nwere ike imebi imeju.
Ndepụta aha ọ na-ebuli ọbara mgbali elu?
Orlistat na-akwalite oke nhụjuanya na-emetụta ahụike nke metụtara nbelata dị ukwuu na ọbara mgbali elu na ọnụọgụ obi, ma nwee ike nwee ọrụ na njikwa nke ọbara mgbali elu na ndị ọrịa buru oke ibu na oke ibu.
Nchịkọta nwere ike ibute nsogbu akụrụ?
Orlistat bụ ihe mgbochi nke gastric na pancreatic lipase nwere nrụpụta dị irè na mmụba na mmezi nke ọnwụ. Ọ bụ ezie na iji ya eme ihe na-akpata nsogbu ma ọ bụ nsogbu na-akpata nsogbu, ọ na-adịbeghị anya jikọtara ya na nnukwu mmerụ akụrụ (AKI).
Ndepụta ọ na-eri ahụ?
Orlistat bụ pancreatic lipase inhibitor na-egbochi abụba absorption na digestive tract. N'ihi na ọ naghị emetụta usoro ụjọ nke etiti, orlistat nwere ike ọ gaghị enwe ihe ndị na-eri ahụ.
Ndi Orlistat FDA kwadoro?
Xenical (orlistat 120mg) bụ nke FDA kwadoro na 1999 maka ọgwụ oke ibu na njikọta na nri caloric belatara, yana iji belata ihe ize ndụ nke ịmaliteghachi ibu mgbe ọ gbasịrị ibu arọ.
Kedu ka ị ga - esi were 120 mg?
Dosedị usoro ọgwụgwọ Orlistat bụ otu capsule 120 mg were nke ọ bụla n'ime isi nri atọ kwa ụbọchị. Enwere ike iwere ya ozugbo tupu, n'oge nri ma ọ bụ rue otu elekere mgbe nri. Eji mmiri rie capsule ahụ.
Nchịkọta nwere ike ibute uru?
Ọnwụ ọnwụ dị ukwuu n'ihi Orlistat na-eme n'ime ọnwa isii mbụ ị ofụ ọgwụ. Ọ bụrụ na ị kpebie ịkwụsị iji Orlistat maka ọnwụ, ị kwesịrị ịnọgide na-eri nri ahụike ma na-emega ahụ oge niile. Agbanyeghị, ịnwere ike ịnweta uru dị arọ mgbe nke a gasịrị.
Kedu otu ngwa ngwa ị ga-esi belata ibu na ndepụta?
Orlistat (aha aha: alli) bụ ọgwụ OTC nke FDA kwadoro nke nwere ike inyere ndị okenye buru oke ibu aka. Orlistat na-arụ ọrụ site na igbochi abụba ka ọ banye n'ime ahụ mgbe erichara ya n'oge nri. Ihe dị ka kilogram 5 ruo 10 nwere ike ịla n'iyi n'oge ọnwa isii mbụ nke ojiji.
Ogologo oge ole ka alli ga-amalite ọrụ?
Kedu mgbe m nwesịrị ịnyịnya alli® ka m ga-atụ anya ịhụ nsonaazụ? Ọ bụrụ n ’ịgbaso kalori dị obere, nke nwere obere abụba, na-emega ahụ oge niile, ma were capsules alliles dị ka a gwara gị, ị ga-ahụ nsonaazụ n’izu abụọ mbụ. Ọtụtụ ọnwụ na-emekarị n'ime ọnwa isii mbụ.
Ndepụta aha ọ na-egbochi agụụ?
Orlistat (Xenical) bụ ọgwụ nke GP nyere gị iwu. Emepụtara ya iji nyere aka ọnwụ. Nnyocha egosiwo na site na iji Orlistat, yana nri ahụike na mmega ahụ, enwere ụba ọnwụ. Ọ naghị edochi nri ma ọ bụ mmega ahụ ọ naghị egbochi agụụ gị.
Orlistat ọ na-arụ ọrụ n'ezie?
Nnyocha egosiwo na, na nkezi, ma ọ bụ ndepụta, tinyere nri na-ebelata ibu na mmega ahụ, na-akpata ọnwụ dị arọ karịa nri na-ebelata ibu na mmega ahụ naanị. Peoplefọdụ ndị na-efunahụ 10% ma ọ bụ karịa nke ahụ ha n'ime ọnwa isii site na enyemaka nke ndepụta. Na ndị ọzọ, ọ naghị arụ ọrụ nke ọma.
Nchịkọta nwere ike ibute pancreatitis?
Mkpebi akụkọ anyị na-egosi na ịdebanye aha nwere ike ịkpalite ọgwụ na-akpata nnukwu pancreatitis na ụfọdụ ndị ọrịa. Maka ndị ọrịa na-ebute mgbu afọ n'oge na-adịghị anya ha bidoro, a ga-atụle nchoputa nke pancreatitis. Anyị na-atụ aro iji nlezianya jiri nlezianya debanye aha na ndị ọrịa nwere ihe mmerụ ahụ pancreatic.
Kedu oge kachasị mma iji debanye aha?
Orlistat na-abịa dị ka capsule na capsule na-abụghị nke a ga-eji were ọnụ were were. A na-ewerekarị ya ugboro atọ n'ụbọchị na isi nri ọ bụla nwere abụba. Were orlistat n'oge nri ma ọ bụ rue 1 awa mgbe nri. Ọ bụrụ na enwetaghị nri ma ọ bụ na enweghị abụba, ị nwere ike ịhapụ ọgwụ gị.
Ego ole ka ị nwere ike idafu n’ime otu ọnwa ma ọ bụrụ na i buru ibu?
Nke ahụ pụtara, na nkezi, na ịchọrọ maka 4 ka 8 kilogram nke ọnwụ kwa ọnwa bụ ihe mgbaru ọsọ dị mma. Naanị n'ihi na enwere ike ida ọtụtụ ihe, ma ọ dịkarịa ala na ọnwa mbido nri, ọ pụtaghị na ọ dị mma ma ọ bụ na ibu ga-apụ ogologo oge.
Gini mere mmanu mmanu mmanu mgbe ị na-ewere Orlistat?
Ebe mmanụ pere mpe karịa mmiri, eriri afọ a ga-apụta n’ụlọ mposi dị ka mmanụ oroma nke nọ n’elu mmiri. Fọdụ ndị mmadụ nwere ike ịkọwa isi keriorrhea dị ka mmanụ mmanụ siri ike. Mgbe ụfọdụ, mmadụ nwekwara ike ịgafere nsị n'akụkụ mmanụ.
Gịnị Bụ Cetilistat
Ceilistat, makwaara site na aha akara Kilfat, Checkwt, Cisislim, Celistat bụ ọgwụ ọhụrụ na-efu ọnwụ.
Gịnị kpatara Anyị ji chọọ Cetilistat?
oke ibu bu oria ekwesighi kariri uwa nile. Onye ọ bụla nwere ike ọ gaghị achọpụta nsonaazụ site na mmega ahụ na iri nri dị ọcha; n'ihi ya enwere ike iji Cetilistat lụso oke ibu ọgụ.
Kedu ka Cetilistat si arụ ọrụ?
Cetilistat na-arụ ọrụ site na igbochi mmebi na ịmịkọrọ abụba. Ọ na-eme nke a site na mgbochi nke e guzobere pancreatic lipase nke ọrụ ya bụ imebi triglycerides na eriri afọ. Ozugbo triglycerides enweghị ike ịmịnye ya dị ka abụba abụba n'ime ahụ, ha na-enweta excretion.
Uru Cetilistat na Ibu Ibu
1.Helps ifelata gi ga na adi ndu dika odi nma, na enyere gi aka n’ilebe BMI anya.
2. Na-enye nsonaazụ n'ime obere oge, Cetilistat na-enye gị ahụ bikini n'ime izu iri na abụọ.
Etu esi eji Cetilistat
Ọtụtụ mgbe, a na-ere ntụ ọka Ceilistat n'ụdị capsules 60mg nke a na-eji ọnụ ekwu. Fọdụ ndị ga - ahọrọ ịwe ya mgbe oge nri gachara, mana ịkwesighi ịfefe otu elekere oge nri.
Cetilistat Ọ Na-arụ Ọrụ n'Ezie?
Cetilistat bụkwa ọgwụ dị mkpụmkpụ ma ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe kachasị mma iji chịkwaa ibu maka oge ndụ gị niile. Ọ bụrụ na ejiri ya ruo ogologo oge, ọ nwere ike ibute ahụ riri ahụ yana nsogbu nke eriri afọ.
Otú ọ dị, a hụrụ na a ga-anabata ya n'ụzọ ka mma ma e jiri ya tụnyere ọgwụ ndị ọzọ na-efu ọnwụ dị ka Orlistat.
Kedu onye nwere ike iji Cetilistat?
BMI gị karịrị iri abụọ na asaa, ị na-arịa nsogbu ahụike metụtara oke ibu dịka ọbara mgbali elu na ọrịa shuga.
Ihe na-emetụta Ọkachamara Nkeil
Imirikiti mmetụta Cetilistat bụ eriri afọ na akwara.
Mbelata na vitamin E na D ọkwa, nsị na-adịghị mma, Mwepu ngwa ngwa, Igbapụta mmiri ， Fatty stools ， Oily stools ect.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ịchọrọ nke Cetilistat?
Y’oburu n’atufu ogwu gi, onwere ihe abuo i kwesiri ichebara; otú ị ga-esi ghara ịnọrọ ọdụ na mgbe usoro ihe omume gị ga-abịa. Ọ bụrụ na ichetara na ịfughị ​​ọgwụ, were ya ozugbo ị chọpụtara.
Ọ bụrụ na nhazi oge ọzọ dị nso, gafee na Cetilistat nke na-efu ma maliteghari usoro ị na-edenye oge niile. Ejila ihe ọzọ ị ga-eme iji nweta ihe ị na-eche, n'ihi na nke a ga-eduga gị anụbiga ya ókè. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka icheta oge ị takeụ ọgwụ gị na-aghọ ọrụ, ịnwere ike ịtọ mkpu mgbe niile ma ọ bụ gwa otu ndị enyi gị ma ọ bụ ndị ezinụlọ gị ka o chetara gị.
kedu ihe dị iche na cetilistat na ndepụta?
a na - ejikọkwa ọgwụgwọ na ndepụta ma ọ bụ ọtụtụ ihe na - akpata ọrịa afọ (AEs) nke na - eme kawanye njọ n'etiti ndị ọrịa na - anaghị agbaso nri obere abụba a tụrụ aro. Ceilistat bụ ihe mgbochi nke pancreatic na eriri afọ, na ọ bụ kemịkalụ dị iche na ndepụta.
No.27 Keyuan Street, District Development Economic, Shanghe County, Jinan City, Shandong Province
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ.
biko kpọtụrụ na [email protected]
C 2020 cmoapi.com. Ikike niile echekwabara. Ngọnarị: Anyị anaghị ekwu ihe ọ bụla gbasara ngwaahịa erere na weebụsaịtị a. Enweghị ozi enyere na weebụsaịtị a ka FDA ma ọ bụ MHRA enyochala. A na-enye ozi ọ bụla e nyere na weebụsaịtị a ka anyị mara ihe niile, ọ bụghị iji dochie ndụmọdụ nke onye dọkịta ruru eru. Ihe akaebe ọ bụla ma ọ bụ nyocha ngwaahịa nke ndị ahịa anyị nyere abụghị echiche nke cmoapi.com na ekwesighi iwere dị ka nkwanye ma ọ bụ eziokwu.